Baydhaba: Dad helay adeeg Indha fiiqis lacag la’aan ah – SOMA: Somali Media Association
In kabadan 50 Qof oo iskugu jirta dan yar ku nool gudaha Magaalada Baydhabo iyo kaamamka Barakacaaysha iyo qaar ka yimid Degmooyinka iyo Tuulooyinka ka tirsan Gobolka Bay ayaa ka faaideystay Howlo indho fiiqis ah uu fuliyey Isbitaalka Daryeel ee Baydhabo.
Mashruucaan waxaa ka faa’iidey haween, caruur, iyo dad waa weyn, oo qaarkood in muddo ah aan il ama labada il waxba ka arag.
Qaliinka Indho fiiqista ayaa ahaa mid lacag la’aan ah oo si mutadawacnimo u fulinayey Dr C/llaahi Kooshin oo ka tirsan Dhaqaatiirta Indhaha ee Dalka.
Dad ka badan Boqol qof ayuu qorshaha ahaa, in qalliinkaan loo sameeyo, hayeeshee Dhakhtarkii fulinayay howshan, oo safar deg deg ah, galay ayaa dib loogu dhigay ilaa 50 qof oo kale.
Maxamed Maxamuud Cusmaan waa Agaasimaha Isbitaalka Daryeel ee Baydhabo waxa uu Barnaamijka Wadaag u sheegay in Qallinka uu socday mudo Shan maalin ah.
Waxa uu tilmaamay in xulashadoodu ay ahayd sida ay dadka u kala dar naayeen, hayeeshee wali ay jirto baahi dhanka caafimaadka indhaha ah oo loo qabo.
Maxamed Maxamuud ayaa nooga warbixiyey howsha indha Fiiqista ah sida ay dadku ku gaarsiiyeen kahor inta aysan bilaabin.
“Doorashada aan dooranay in aan Baydhabo ku qabo qaliinka Indha fiiqista ma ahan mid anaga dooranay ee waxaa naga soo codsaday dadka ku nool Deegaanada KGS, kadib Codsigooda Ayaan tixgaliney oo waxaa u raadinay Dhaqtar, arintaan waxay ka timid baahiyaha araga ee ay qabaan Bulshada aad ayaana ugu faaideysteen Bulshada, wax lacag ah oo laga qaadayo majiro waa ognahay in ay qarash badan ku baxa qaliimada Indhaha anaga lacag la’aan ayaa ugu fuliney” ayuu yiri agaasimaha Isbitaalka lagu qabtay howshaan.
Araga waxaa uu kamid yahay Xubnaha ugu muhiimsan ee Bani’aadanka, waxaase jirta in mararka qaar dadku ay sabab u noqdaan in ay waayaan.
Maxamed Deerow Salad oo ah 26 jir haysta, laba caruur ah, kuna nool Baydhaba, waxa uu kamid ahaa dadkii loo qabatay howsha indha fiiqista. Waxaa looga sameeyey Labada il oo uusan horay waxba uga arkeenin. Waxa uu ii sheegay in hadda ay xaaladiisu tahay mid ka wanaagsan sidii hore
Maxamed Deerow ayaa Indhihiisa uu ku waayey Daawo aan dhakhtar usoo qorin ee uu isticmaalay sanadkii 2004-tii, xilligaas oo uu jiray Toban sano.
“Aniga anoo 10 sano jira ayaa arageyga ku waayey daawo aan isticmaalay mudo 16 sano ayaa arag la’aan ahaa mana awoodin qarash aan daawo ku raadsado hadaan heyn lahaa meel kasta ayaan tagi lahaan, laakiin waxaa dadka ka maqlay in uu jiro dhaqtar indhaha daaweeyo sidaas ayaa ku tagay maasha allah xanuun ayaa dareemayaa hada indhahana waxbaan ka arkaa”
Abshira Ibraahim Macalin Xasan oo Todobo jir ah, waxaa loo fiiqay hal il, oo aysan wax ka arki jirin. Waxaa kasoo gaaray dhaawac kadib markii gabar ay wada ciyaarayeen ay dhagax uga dhufatay isha bidix, sanad kahor.
Waxa ay ku nooshay mid kamdia xerooyinka lagu soo barakacay ee Baydhaba. Qoyskeeda oo ka yimid Tuulada Qansaxdheexe ee Gobolka Bay sanadkii 2017-kii, ayaa la tacaalayey tan iyo xilligaas sidii ay gabartooda u heli lahayd daweyn fiican.
Abshira hadda iyana waxa ay daremeysaa in araga isheedii uu dib usoo laabanyo. Aabaha Abshira, Ibraahim Macalin Xasan, oo dareemay farxad weyn ayaa nala wadaagay, sida ay kusoo gaartay in howshan laga fulinayo Magaalada Baydhaba.
“Aniga waxaan ahay Aabaha Abshira waxaan ka maqlayney Idaacada Allxamdullilah waa loo soo fiiqay arageedana waa uu wanaagsan yahay, hal sano ayaa arag la’aan ahayd gabadheyda, gabar dariska ah ayaa Dhagax ku dhuftay, ana wax kama qaadan dhaqtarka ayaa u geystay hada arageeda waa boqolkiiba boqol”. sidaa waxaa yiri Aabaha Abshira.
Inkastoo Dadka ay tiro badnaayeen inta isdiiwaan galisay hadana tirade indhaha loo fiiqay marka loo eego farqiweyn ayaa u dhaxeeya, hayeeshee Tan waxay muujineysaa in ay jirto baahi weyn ay bulshada u qabto dhaqtar daaweeya Cudurada Indhaha oo laga dareemayo Baydhabo tirade dhaqaatiirta eek u sugan marka loo barbar dhigo inta taqaana daweynta indhaha waxaa kuu soo baxaya in ay yar yihiin ama aysan jirin Dhaqtarada Indhaha qaabilsan waana baahi jirta oo u baahan Buuxin.
WQ: Shukri Ismaaciil Axmed oo Radio Warsan ka tirsan.
Baledweyn: Iskuulada Magaalada oo ay Saameysay Fatahaadda Wabiga